jeudi, 19 septembre 2019 19:53
Governemanta sy ny mpiara-miombon’antoka: Niara-nidinika mikasika ny fampandrosoana
Notanterahina teny amin’ny lapan’ny Praiminisitra, Mahazoarivo, androany ny fiaraha-midinika andiany faha-16 teo amin’ny Governemanta sy ny mpiara-miombon’antoka mikasika ny fampandrosoana. Hevi-dehibe telo no nifantohan’ny dinika, dia ny fiomanana amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy ireo mpikambana eo anivon’ny Filankevitry ny tanàna, ny « Plan Emergence Madagascar » ary ny mahakasika ny fanavaozana ny sehatry ny fanabeazana (PSE). Mahakasika ny fiomanana amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna dia nanambara ny Lehiben’ny governemanta fa mahatsapa ny fahatomombanana sy filaminan’ny zotra anomanantsika io fifidianana io ireo mpiara-miombon’antoka ka naneho ny fankasitrahany an’i Madagasikara.
mercredi, 18 septembre 2019 11:37
Ampanihy Andrefana: Misedra olana ny lalampihariana «Mohair »
Tombanana manodidina ny 15 000 ny olona mivelona amin’ny lalampihariana «Mohair » aty amin’ny Distrika Ampanihy, Faritra Atsimo Andrefana, ary ny 80%-n’ny mponina dia mahafehy ny fanamboarana “tapis mohair” avokoa. Misedra olana ity lalampihariana ity amin’izao fotoana izao, satria dia mihasimba ny taranak’osy Angora fakana volony, izay akora amin’ny fanaovana karipetra « Mohair ». Manampy trotraka ny tsy fahampian’ny sakafo noho ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny fitantanana ara-pahasalamana. Nisy ny loabary an-dasy natao ny 14 septambra lasa teo, nijerena vahaolana handrindrana ity lalampihariana ity, ary koa hanatsarana ny taranak’osy amin’ny alalan’ny fanaovana safiotra. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 18 septembre 2019 11:26
Fizahantany: Mandresy lahatra ireo vahiny mpampiasa vola i Madagasikara
Nisokatra ny 17 septambra 2019 teny amin’ny CCI Ivato - Antananarivo, ny andiany voalohany amin’ny vovonana iraisam-pirenena ho an’ny famatsiam-bola ho an'ny fizahantany sy ny fitaterana, Wave Madagascar. Tanjona ny hahatratra mpizahatany miisa eo amin’ny 800 000 isan-taona, izay hampitombo ny famoronana asa, ny vola miditra azo avy amin’ny fizahantany ary ny harin-karena faobe. Haharitra hatramin’ny 20 septambra 2019 ity andiany voalohany amin’ny Wave Madagascar ity. Ny andro roa voalohany dia hiompana amin’ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany sy fandraharahana, ary ny roa andro farany kosa dia hisy fidinana ifotony ataon’ireo mpandray anjara mba hahafahan’izy ireo mijery mivantana ireo toerana hiantsoana ireo mpampiasa vola. (Jereo Sary Tohiny)
Star: Fampiroboroboana ny Malto sy ny fiaraha-miasa amin'ny tantsaha
Tao anatin'ny efapolo taona niorenany Malto, izay isan'ny rantsan'ny Star. Tanjona imasoan'ny Star hatrany ny fampiroboroboana ny vokatra vita malagasy amin'ny alalan'ireo vokatra azo antoka, ary vokatry ny fahaiza-manaon'ny Malagasy. Ireo karazanam-bokatra ireo dia reherehan'ny Malagasy rehetra. Mifanojo tanteraka amin'ny soatoavina voizin'ny Star ny fifanajana, ny fiandrianana ny mpanjifa ary ny fampitomboana hatrany ny fiarin-karena maharitra. Ny Star dia nanatanteraka hatrany ny asany tao anatin'ny fitsinjovana ny fampandrosoana an'i Madagasikara. Hisy ny fiaraha-miasa amin'ny Malto sy ny Star mba hanomezana hatrany fahafaham-po ny mpanjifa, ka io fiaraha-miasa io dia ampiarina amin'ny alalan'ny taratasy fifanaraham-pambolena amin'ny tantsaha. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 17 septembre 2019 20:20
Famokarana savony: Nifampidinika ireo mpandraharaha sy ny ministeran’ny indostria sy varotra
Nifantoka tamin'ny hijerena vahaolana manoloana ny asa famokarana, izay miantomboka amin'ny akora fototra, ka hatramin'ny vokatra azo avy amin'ny fanodinana, ny fihaonan’ireo tompona orinasa sy ireo mpandraharaha misahana ny famokarana savony, izay nahitana solontena avy ao amin'ny Savonnerie d'Antsirabe, SOCITA, groupe SIPROMAD, SICOMA... tamin’ny Minisitry ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana, Rakotomalala Lantosoa, tetsy amin'ny ministera Ambohidahy, ny 06 septambra lasa teo. Hitsinjovana ny tombontsoan'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny kalitaon'ny vokatra sy ny vidin’entana mari-toerana no isan’ny anton'izao fihaonana izao.
Efa manomboka ny fanadiovana sy fanalana ny fasika sy atsanga ao anatin'ny Canal des Pangalanes, izay natomboka avy aty Toamasina. Tsy mahavita 500m akory, dia mikatso ny helice 2 mampandeha ny milina, fa feno fako, pneu, gony. Miditra an-tsehatra ireo mpijoboka anaty rano manala izany. tsy lasa alavitra akory, dia feno fako indray, dia toy izany hatrany. Hitan'ny rehetra ihany koa ny menaka maloto, ny gazoil maimbo, sy ireo fako ary loton'ny ozinina, ariana ao anatin'ity lakandranon'ny Pangalanes ity. Na ireo olo-be an-tanàna aza dia efa tsy mahateny ireto tompon'orinasa vavety manary loto tsy manaja tontolo iainana ity, ka dia samy mifampibisibisika sisa hoe, efa hitan'ny Filoham-pirenena izy io, ka mety izy sisa no ahateny sy anasazy ireo mpandoto ny rano izay misy misotro, sy midio aminy io. Ny trondro dia maty ho azy, nefa mbola amidin'ny olona ihany, ka efa any ambilany vao heno maimbo pétrole sy gazoil, savony, ary menaka maloto. Mitaraina mangidihidy ihany koa ireo mponina manodidina amin'ny fampiasana ny rano.
Ny orinasa Witec no hanatanteraka ny fananganana tobim-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro ho an’Antsirabe. Notanterahina nandritra ny « Vitrine du Vakinankaratra » teto Antsirabe ny fanaovan-tsonia ity tetikasa ity, teo amin’ny ministeran’ny Angovo sy ny rano ary ny akoran’afo sy ity orinasa ity. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 14 septembre 2019 21:58
Lakandranon'ny Pangalanes: Hajariana ho azo ifamoivoizana
Ny taona 2016 nandritra ny nampiantranoan’i Madagasikara ny fivoriamben’ny Frankôfônia no niresahana ny hanajariana iny lakandranon'ny Pangalanes iny. Naneho ny fahavononany hanome tanana ny Malagasy tamin’izany ry zareo Maraokanina. Liana ny hanao asa fihariana mikasika ny fizahantany sy fampiantranoana manamorona iny lakandrano iny rahateo ny mpandraharaha Maraokanina, ankoatra ny fanamboarana hopitaly ho an'ny Reny sy zaza ao Antsirabe ary koa ny fanofanana ara-teknika. Enim-bolana no nambara tamin’izay fa hanaovana ny fanadihadiana mialoha ny asa, mikasika io lakandrano io.
samedi, 14 septembre 2019 19:19
Angovo avy amin'ny masoandro: Hisy tobim-pamokarana enina haorina aty Vakinankaratra
Mandoto, Faratsiho, Tombontsoa, Antsirabe, Antanifotsy ary Ambatolampy : ireo ny tanàna enina hanorenana tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro enina aty amin'ny faritra Vakinankaratra. Hamokatra 5MW tsirairay ireo toby ireo, ary orinasa Malagasy telo no hanangana azy ireo. Efa vita ny fifanaovan-tsonia tamin’ireo orinasa ireo, niarahany tamin’ny ministeran’ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo. (Jereo Sary Tohiny)
Faha-49 ity fivorian’ny Komitin’ny Governoran’ny Banky Foibe (Committee of Central Bank Governors) amin’ireo firenena mikambana eo anivon’ny SADC ity, izay tanterahina nanomboka ny 11 septambra ka nifarana androany 13 septambra 2019. Miisa 75 ireo delege mandray anjara amin’ny fivoriana, avy amin’ireo Banky Foibe miisa 15, mpikambana eo nivon’ny vondrona SADC, tarihin’ny Governorany isanisany avy. Sambany i Madagasikara no nampiantrano ity fivoriana ity.